भारतमा भेटियो नोरोभाइरस : के हो यो ? कति खतरनाक ?
कार्तिक २९, २०७८ १५:०१ मा प्रकाशित
भारतमा पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्या निकै कम छ । करिब २ महिनायता भारतको केरला राज्य कोभिड–१९ संक्रमणबाट निकै प्रभावित छ । प्रतिदिन भारतमा थपिएका नयाँ संक्रमित मध्ये अहिले पनि ४० प्रतिशत हाराहारी केरला राज्यका मात्रै छन् ।
कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको केरलामा नेरोभाइरसको संक्रमण पनि फेला परेको छ ।
भारतीय मिडियामा आएका खबर अनुसार केरला राज्यका स्वास्थ्यमन्त्री बीना जर्जले दुर्लभ नोराभाइरस फेला परेको भन्दै शुक्रबार नै सबैलाई सचेत गराएका छन् । केरलाका स्वास्थ्य मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै दिन्दुस्तान टाइम्सले दिएको खबर अनुसार केरलाको वायनाड जिल्लाको एक पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत १३ विद्यार्थीमा नोरोभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
उनीहरुलाई दुई साताअघि नै संक्रमण देखिएको थियो । यो अहिले नै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि सतर्क रहन स्वास्थ्य मन्त्री बीना जर्जले आग्रह गरेका छन् ।
नोरो भाइरसका विषयमा पनि केरला राज्यको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान्य जानकारी दिएको छ ।
यो दूषित पानी, खानेकुरा र जनावरबाट सर्ने भाइरस हो । संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा रहँदा, भाइरस रहेका सतहमा छोएर त्यही हातले खान खाने, मुखमा लाने गर्दा यो भाइरस सर्न सक्छ । संक्रमित व्यक्तिको दिसा, पिसाब तथा वान्ताबाट पनि यो भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा सर्छ ।
स्वस्थ व्यक्तिलाई यसले सितिमित आक्रमण गर्न सक्दैन । वृद्ध, बालबालिका, दीर्घरोगी र रोघप्रतिरोधी क्षमता कमजोर भएकालाई यसले गम्भीर बिरामी बनाउँछ ।
नोरोभाइरस संक्रमण भएको खण्डमा पेट तथा आन्द्र सुन्निने हुन्छ । पेट दुख्ने, पखाला लाग्ने, वान्ता हुने, पेटमा ग्यास भरिने समस्या देखिन सक्छ । शरीरको तापक्रम वृद्धि हुने टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, शरीर दुख्ने जस्ता लक्षण देखिन्छ ।
स्वस्थ पानी र खानपानले नै यो भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन सकिन्छ । स्वस्थ खाना खाने, पानीलाई राम्रोसँग उमालेर तथा शुद्ध बनाएर खाने । पानीका स्रोत तथा जम्मा गर्र राख्ने भाँडा, ट्यांकीहरु सफा राख्ने गर्नुपर्छ ।
शौचालय गएर आएपछि राम्रोसँग साबुनपानीले हात धुनुपर्छ । जनावरसँग धेरै समय रहनेले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । काँचै खाने फलफुल तरकारीहरु राम्रोसँग पखालेर खानुपर्छ ।
यो भाइरसको संक्रमणले बिरामी परेमा घरमै बसेर घरेलु उपचार गर्दा पनि निको हुन्छ । शरीरमा पानीको मात्र कमी हुन नदिने प्रशस्त झोल खानेकुरा खाइरहनुपर्छ । अवस्था जटिल हुँदै गएमा भने तुरुन्त स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ ।